Telecel Zimbabwe Archives - The Source
Telecel Zimbabwe seeks $200mln reboot
HARARE, May 18 (The Source) – Zimbabwe’s smallest mobile network operator, Telecel is in discussions with investors over a $200 million loan seen as crucial to reviving its operations. Telecel has 1,8 million active subscribers out of its 4,6 million total customers according to the… Read More
Econet hikes data charges after Potraz nod
HARARE, January 11 (The Source) – Zimbabwe’s mobile network operator Econet Wireless has increased its data charges in line with the floor prices set by the regulator. Postal and Telecommunications Regulatory Authority (POTRAZ) set the floor price for data at 2 cents per megabyte (MB)… Read More
HARARE, November 30 (The Source) – The Zimbabwe government has completed the acquisition of Global Telecom Holdings’ (GTH) entire shareholding in Telecel International for $40 million. The deal, which has dragged on since 2014 when Vimpelcom, the parent company of GTH announced its intentions to… Read More
HARARE, November 7 (The Source) – Government has gazetted regulations which make it compulsory for mobile telecommunication operators to share infrastructure, a move which could cut costs by as much as 60 percent but which analysts say will only benefit its poorly resourced networks. The… Read More
Telecel targets Diasporans with 10pct bonus on remittances
HARARE, November 7 (The Source) —Telecel Zimbabwe says it will pay a 10 percent bonus to all recipients of inward remittances on its mobile money platform. The mobile operator was last year granted permission by the central bank to receive international remittances directly into subscribers’… Read More
Telecel Zimbabwe bids to expand local footprint
HARARE, August 3 (The Source) – Zimbabwe’s third largest mobile network operator, Telecel says it has added 15 franchise stores as it bids to increase its footprint in the country. The telco, Zimbabwe’s smallest with about 2,4 million subscribers, started the retail expansion last year… Read More
HARARE, June 23 (The Source) – ICT Minister Supa Mandiwanzira broke the rules and got a $194,000 loan from a parastatal under his Ministry for the purchase of a vehicle, a report by the Auditor general reveals. The Auditor General’s department, in its new report… Read More
HARARE, April 11 – Zimbabwe has completed the $40 million purchase of a 60 percent stake in mobile telecoms operator Telecel Zimbabwe from Vimpelcom, the communications minister said on Monday. The Amsterdam-headquartered telecoms giant VimpelCom in November said it had agreed to sell its controlling stake… Read More
HARARE, February 9 (The Source) – Zimbabwe is among several sub-Saharan countries that stand to benefit from the growth of mobile phone banking which has potential to boost economies and create opportunities for banks, global credit rating firm Moody’s has said. In a report, entitled… Read More
BULAWAYO, January 15 (The Source) — The Postal and Regulatory Authority of Zimbabwe (Potraz) has increased the voice tariffs charged by mobile network operators to 16 cents per minute from the current 15 cents per minute with effect from the new year. The move will… Read More